Nzira yekushandisa sei kuwedzera
Isa kuwedzera kwe Chrome
➥ Enda ku URL ⤓ Download
Iyi URL yakachengeteka!
Tarisa imwe URL
Malware uye chekuita zvepishing.
Ichi chekuchengetedza chivakwa chakavakwa kuti chione nzvimbo dzisina kuchengetedzwa mukati mewebhu uye zivisa vashandi vekukuvadza. Tinotarisira kukurudzira kufambira mberi kune imwe nzvimbo yakachengeteka uye yakachengeteka.
Aya mawebsite ane ikhodi inowedzera software yakaipa pavashandi 'emakombiyuta, kana kana munhu anofunga kuti vari kukanda software yakarurama kana pasina ruzivo rwemushandi. Hackers vanogona kushandisa purogiramu iyi kutora uye kutumira vashandisi vari voga kana kuti ruzivo ruzivo. Shanduro yedu Yeku Browsing Inochengeteka inoongorora uye inotsvaga webhu kuti ione mawebsite angangoderedzwa.
Aya mawebsite akaita seanokodzera kuitira kuti vanyengedze vashandisi kuisa mazita emazita avo emazita uye mapepasi kana kugovera mamwe mashoko ehupfumi. Mapeji anonyanya mawebhiti ebhangi kana nzvimbo dzepaIndaneti maitiro akajairika emasitepiti ekunyengera.
Nzira yatinoziva nayo malware
Izwi rokuti malware rinosangana nehuwandu hwemapurogiramu yakaipa akagadzirirwa kukuvadza. Mawebsite ane hutachiona akaisa malware pamushandisi wemushandi kuti atore ruzivo rwomunhu oga kana kutora mashandisi emushandisi uye anoshora mamwe makombiyuta. Dzimwe nguva vashandisi vanobvumira iyi malware nokuti vanofunga kuti vari kuisa software yakachengeteka uye havazivi kuipa kwekuita. Dzimwe nguva, malware inobudiswa pasina ruzivo rwavo. Mhando dzakawanda dze malware dzinosanganisira ransomware, spyware, mavairasi, minye, uye Trojan mabhiza.
Dambudziko rekushaya mari rinogona kuviga munzvimbo dzakawanda, uye zvinogona kuva zvakaoma kunyange kune nyanzvi kuti vaone kana webhusaiti yavo ine utachiona. Kuti tiwane kuiswa kwemasayiti, tinoongorora webhu uye tishandise makashini chaiwo kuti tiongorore nzvimbo dzatakawana zviratidzo zvinoratidza kuti site yakave yakakanganisa.
Aya ndiwo mawebsite evanhu vanosemesa vakagadzirira kuti varatidze kugadzirira uye kugovera purogiramu yakaipa. Aya masayiti anonyatsoshandisa mushandisi kana ane software inokuvadza inowanzoratidza maitiro akaipa. Kodzero yedu yekombiyuta inokwanisa kuona kuti mafambiro aya akaisa zvikamu izvi semasita ekurwisa.
Aya ndiwo mawebhusayithi ane kodzero akave akavharwa kusanganisira zvinyorwa kubva, kana kutungamirira vashandisi ku, nzvimbo dzingashandisa ma browsers avo. Somuenzaniso, peji yepaiti inogona kukanganisa kusanganisira kodeti inodzorera mushandisi kune nzvimbo yekurwisa.